शैतानको प्रभाव हटाउन परमेश्‍वरको न्याय अनुभव गर
मानिसले जीवन शैतानको राज्यक्षेत्रमा जिउँछ। सबै भ्रष्टतामा जिउँछन्। कसैले आफैलाई शैतानबाट मुक्त गर्न सक्तैन। फोहोर संसारमा देह, वासना र शैतानको लागि मूल्य र अर्थरहित लापरवाह जीवन जिउँछन् सबै।
मानिसले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेर बाइबल पढेपनि, शैतानबाट मुक्त हुने सत्यता भेट्टाउन सक्तैन। युगौँदेखि थोरैले मात्र यो रहस्य बुझेका छन्। मानिसले शैतान र देहलाई घृणा गरेपनि त्यसको पकडबाट मुक्त हुन सक्तैन।
मानिस अझै शैतानको पासोमा परेको छ।
यदि सिद्ध पारिन चाहन्छौ भने, तिमीले उहाँको काम र मानिसलाई गर्नुहुने न्यायको महत्व बुझ्नुपर्छ। के तिमी उहाँको सजाय र न्याय स्वीकार्न सक्षम छौ? के तिमी पत्रुसको ज्ञान र अनुभव प्राप्त गर्न सक्षम छौ? यदि उहाँलाई र पवित्र आत्माको कामलाई जान्ने लक्ष्य राख्छौ र आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्न खोज्छौ भने, तिमीसँग सिद्ध पारिने मौका छ।
शुद्ध नपारिएमा मानिस फोहोर हुन्छ। उहाँको सुरक्षामा नभए, ऊ शैतानको कैदी हो। उसलाई सजाय दिइएको छैन, न्याय गरिएको छैन भने, शैतानको अँध्यारो प्रभावबाट उम्कन सक्तैन।
मानिसलाई उहाँको सुरक्षा चाहिन्छ।
तिम्रो विचार र दिमाग धोइएका छैनन् भने, ती शैतानको हातद्वारा नियन्त्रित छन्। तिम्रो विचार र दिमाग धोइएका छैनन् भने, तिम्रो स्वभावमा न्याय गरिएको छैन भने, तिम्रो पूरै अस्तित्व शैतानको चालवाजीद्वारा नियन्त्रित छ।